December 5, 2013 – democracy for burma
BANGKOK : RED SHIRT TRY TO DISTURB KINGS BIRTHDAY-เวลาประมาณ 23.30 น. มีแก๊งค์มอไซต์เสื้อแดงบุกยิงการ์ดกปปส. ที่ก.คลัง บาดเจ็บสาหัส อดีตสส.ถาวรนำส่งรพ.ราชวิถี
On December 5, 2013 December 6, 2013 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
credit I Support PM Abhisit
เวลาประมาณ 23.30 น. มีแก๊งค์มอไซต์เสื้อแดงบุกยิงการ์ดกปปส. ที่ก.คลัง บาดเจ็บสาหัส อดีตสส.ถาวรนำส่งรพ.ราชวิถี
here you can see they get paid on bus for protest in bangkok
THAILAND : “RED SHIRTS” GET MONEY FOR DEMONSTRATION -แดงรับเงินก่อนขึ้นรถกลับที่ราชมังค์-VIDEO
On December 5, 2013 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
THAILAND PROTEST : ร่วมแรงร่วมใจ-PHOTOS Takerng Somsup
ในสมรภูมิแก๊สน้ำตา ภาพโดย นิรนาม…ภาพนี้เป็ฯภาพผู้ชุมมุนที่ประจำการอยู่ที่ถนนนางเลิ้งครับ ห่างออกไปประมาณ 300-400 เมตรคือสะพานเทวกรรมที่มีการปะทะต่อเนื่อง ทุกคนมาด้วยใจ น้ำหูน้ำตาไหล จมูกแดงจากกลิ่นแก๊สน้ำตากันถ้วนหน้าแต่ไม่มีใครถอย
MYANMAR BURMA : Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်မှ Digital Media မိတ်ဆက်ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း
On December 5, 2013 December 5, 2013 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာလိုပဲ ပြောပါမယ်။ ကျေးဇူးတင် စကားဆိုတော့ အခုကြွရောက် ချီးမြင့်တဲ့ ပရိတ်သတ် အားလုံးကို ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ EMG စတင်တည်ထောင်စဉ် ကတည်က အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ၊ ကြော်ငြာရှင်တွေ၊ အားပေးတဲ့ သတင်း source တွေ၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ကောင်းတူဆိုးဘက် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ၊ ကျွန်တော့်တို့ အပေါ်မှာ အမြဲတမ်း အားပေးခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေအားလုံးကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့ ဒီဂျစ်တယ်မိဒီယာ ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ Generation ပေါ့။ အခု ကျွန်တော် အသက် ၅၀ ရှိပြီ။ လိုက်မမီပါဘူး။ အခု Generation က Third Generation ပေါ့။ Third Generation ကို လိုက်မီဖို့ ကျွန်တော် ဒီဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒီယာကို မိတ်ဆက်ရတာပါ။ အဓိကကတော့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တဲ့ဟာကတော့ သတင်းမီဒီယာကတော့ သတင်းစာရဲ့ သြဇာတိကမနဲ့ သတင်းစာရဲ့ ပျံ့နှံ့ထိုးဖောက်ပုံ သတင်းစာရဲ့ အရေးပါတဲ့ သြဇာတိက္ကမကိုပဲ ယုံကြည်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ခဲ့တာပါ။
တကယ်တော့ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲမှာ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့တွေ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ အကြောင်းတွေ၊ နောက်ထပ် ကျွန်တော့် မီဒီယာဘယ်လို တိုးချဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ အမြဲတမ်း ရှိနေတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် ဘယ်လိုရှေ့ခရီး ဆက်ကြမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ၊ အဆင်းရဲဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည် အခြေအနေဟာ ဘယ်လိုရှေ့ဆက် သွားမလဲဆိုတာ ဘယ်လိုသွားမလဲ ဒါတွေပဲ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ ရှိပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ၆၀ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ဒါမှမဟုတ် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ပိုင်း နိုင်ငံအောက်မှာ နေပြီးတဲ့နောက်မှာ အရှေ့တောင်အာရှ အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံကနေ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းတဲ့ သုံးနှစ်အတွင်းမှာ လူထုဟာ ပိုဆင်းရဲသွားတယ်။ တိုင်းပြည်ဟာ ပိုဆင်းရဲသွားတယ်။ လူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေဟာ ပိုပိုပြီးတော့ ဝေးကွာသွားတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမျိုးမှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကျွန်တော့် လုပ်ငန်းကို တိုးတက်ဖို့၊ ကြီးပွားဖို့၊ အောင်မြင်ဖို့ တစ်ခုတည်း ကိုယ်လွတ်ရုံး ကျွန်တော် စဉ်းစားနေဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်သဘောက် ရောက်နေရတဲ့ နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ ရောက်နေကြတဲ့၊ ဆင်းဆင်းရဲရဲ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ၊ နိုင်ငံအနှံ့ အပြားမှာ အိမ်ဖော်အများဆုံး တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံ၊ ပြည့်တန်ဆာ အများဆုံး တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံကို အပျော်မယားတွေ တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအဖြစ် ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ဘ၀ကို ဘယ်လိုမှ ယူဆနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ Continue reading “MYANMAR BURMA : Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်မှ Digital Media မိတ်ဆက်ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း” →
MYANMAR BURMA : Press Council and Int’l Media Support to draft ethics code for all journalists
On December 5, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
YANGON—Myanmar’s Interim Press Council and an international non-profit organization, International Media Support (IMS), have agreed to work together for the emergence ofacode of ethics that is acceptable to all journalists in the country.
The two parties yesterday signedacooperation agreement at the Press Council office in Yangon.
“This initiative, for the emergence ofajournalism code of ethics which is acceptable to all, isavery important step for Myanmar journalists. The Myanmar Press Council will strive to do its best for the ethical development of journalism in Myanmar,” said Press Council chairperson Khin Maung Aye.
The one-year agreement will pave the way for journalism training across the country, jointly offered by the Press Council and the IMS, as well as foranational journalists’ conference in 2014.
“The IMS and Press Council will give capacity-building training. The courses will focus on ethics. Meanwhile, all journalists will be invited to Yangon foraconference where the Press Council will explain to them the importance of ethics. Later, our members will go to the different regions and listen to the difficulties that journalists face there. After that, we will consider which training is suitable for them. Finally, we will return to Yangon and developaproject plan together,” said Press Council secretary Kyaw Min Swe.
Currently, Myanmar’s interim Press Council has plans to provide 30 journalism training courses with the help of the IMS between June and December next year. Outstanding journalists will be offered scholarships to study abroad, according to the Press Council.
MYANMAR BURMA : လူသတ်မှုနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၁၄ဦး အင်ဒိုက ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
On December 5, 2013 December 5, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
လူသတ်တာ ထောင် (၉) လပဲကျတယ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူမားတြားကျွန်းက လဝကအချုပ်ခန်းမှာ
မြန်မာရေလုပ်သား ၈ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဘင်ဂလီ ၁၄ဦးကို
ထောင်ဒဏ် ၉လ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့တည်ဆဲဥပဒေများအရ ဒီလိုပြစ်မှုမျိုးကို
အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် ၂နှစ်မှ အများဆုံး ၁၂နှစ်အထိ
ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လေ့ ရှိပါသည်။ ဒီစီရင်ချက်ကို ဖတ်ကြားပြီးချိန်မှာ
တရားရုံးလာတဲ့ ပရိသတ်က အလ္လာဝက္ကဘာ လို့ကြွေးကြော်ကြပါတယ်။
မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးထောင်သူ အသက် ၂၃နှစ်အရွယ် Sigit Indrajid ကလည်း
သူဟာ မြန်မာတွေကို ရိုဟင်ညာတွေအတွက် လက်စားချေခြင်းဖြစ်ကြောင်း
BENGALI “Rohingya” men KILLED MYANMAR BUDDHISTS IN INDONESIA
လူသတ်မှုနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၁၄ဦး အင်ဒိုက ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာ ၈ ဦးကို ရိုက်သတ်ခဲ့တဲ့ အမှုနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၁၄ဦးကို အင်ဒိုနီးရှား တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၉ လစီ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူမာတြာ ကျွန်း ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာ ထားရှိတဲ့ ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာတွေကြား အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတွေကို ရိုက်သတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ ရိုက်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာတွေဟာ ငါးဖမ်းသမားတွေဖြစ်ကြပြီး အင်ဒိုနီးရှား ရေပိုင်နက်ကို ကျုးကျော်ဝင်ရောက်မှုနဲ့ ဖမ်းစီး ထိန်းသိမ်း ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အသက် ၁၈နှစ်နဲ့ ၃၇ နှစ်ကြားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရိုဟင်ဂျာ တွေပြောတာကတော့ မြန်မာငါးဖမ်းသမားတွေက ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားခဲ့တဲ့အတွက် ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ လူသတ်မှုကျူးလွန်သူကို ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ကျခံရနိုင်ပေမယ့် လူသတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ထောင်ဒဏ်ကိုးလပဲ ချမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက် တရားလိုဖက်က မကျေမနပ်ဖြစ်နေပါတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲ အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် မွတ်စလင်တဦးကိုလည်း အင်ဒိုနီးရှား တရားရုံးက ရုံးတင်စစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။မွတ်စလင်တွေကို ဖိနှိပ်ဆက်ဆံတဲ့ ဘယ်သူမဆို သူ့အနေနဲ့ ရန်သူလို့ သတ်မှတ်သလို သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ်မှာလည်း နောင်တမရဘူးလို့ အဲဒီမွတ်စလင်က တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေ ဖိနှိပ် သတ်ဖြတ်ခံရတာကို ကလဲ့စားချေချင်တဲ့အတွက် မြန်မာ သံရုံးကို ဗုံးခွဲဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
Photo: Credit to Sakhunna Ung
ABC Radio Australia Ref: http://au.news.yahoo.com/world/a/20162093/indonesia-jails-myanmar-muslims-over-buddhist-killings/
BURMA MYANMAR: Indonesia jails “ROHINGYA” Muslims over Buddhist killings
Medan (Indonesia) (AFP) – An Indonesian court Wednesday jailed 14 Muslim Rohingya men from Myanmar for nine months each for bludgeoning eight Buddhists from their country to death in an Indonesian detention centre.
“The defendants have been proven legally and convincingly guilty of working together to blatantly carry out violence, which resulted in the loss of human lives,” chief judge Aksir told the Medan district court.
“We sentenced them to nine months in prison,” he said.
The sentence was lighter than the two-year term sought by prosecutors and the maximum penalty for violence resulting in death, which is 12 years. Continue reading “BURMA MYANMAR: Indonesia jails “ROHINGYA” Muslims over Buddhist killings” →
MYANMAR BURMA : Invitation to Press Conference-ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်မှ မီဒီယာများအား ဖိတ်ကြားခြင်း
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်မှ မီဒီယာများအား ဖိတ်ကြားခြင်း
Dear Media Friends. You are cordially invited to Experience sharing by Wunpawng Ninghtoi (WPN),aCSO helping IDPs in Mai Ja Yang area in Kachin Region will be organised on 7th December 2013 Saturday, at 09:00 AM, at Room 8C, 8th Floor, Myay Ni Gone Plaza, (Next to Dagon Center), Sanchaung, Yangon.
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော စာနယ်ဇင်း၊ သတင်းမီဒီယာမှ ညီအစ်ကို မောင်နှမများရှင့်/ခင်ဗျာ
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုင်ဂျာယန်ဒေသတွင် အခြေစိုက်၍ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ၏ အရေးကို လပေါင်း ၃၀ကြာ ဆောင်ရွက်ပြီ ဖြစ်သော ၀န်ပေါင်နိမ်ထွဲ (Wunpawng Ninghtoi- WPN) ခေါ် အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ယခုလတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသော ကချင်ပြည်နယ်၊ မန်စီမြို.နယ်အတွင်းမှ ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ စာနယ်ဇင်း၊ သတင်းမီဒီယာများအား အသိပေးတင်ပြလိုပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်သတင်း ယူနိုင်ပါရန် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက်။ ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက် (စနေနေ့)
အချိန်။ ။ နံနက် ၀၉၀၀ နာရီ
နေရာ။ ။ အခန်း (၈/စီ)၊ ၈ လွှာ၊ မြေနီကုန်းပလာဇာ၊ မြေနီကုန်းဒဂုံစင်တာနှင့်
THAILAND: Five Cambodians caught for attempting to torch protest stage
Five Cambodians have been arrested by protest guards at Ratchadamnoen Avenue for allegedly attempting to torch the protest stage on December5on the occasion of His Majesty the King’s birthday.
According to Suthep Thuagsuban’s Facebook page, the Cambodians admitted that they were hired byavillage headman in Pathum Thani to set afire the protest stage at the Democracy Monument.
No details were available about the identities of the Cambodians or the paymaster. But maps showing the sites where the group was to cause troubles were found in their possession.
เวทีที่ราชดำเนินจับชาวกัมพูชาได้ 5คน พร้อมแผนที่ชี้จุดตำแหน่งตรงราชดำเนินที่จะให้ก่อเหตุเผาก่อความวุ่นวายในงานวันที่5ธันวาคม 2556
โดยทั้ง5คน บอกว่ามีผู้ใหญ่บ้าน ที่จังหวัดปทุมธานีจ้างให้มาเผาและก่อกวนเวทีที่ราชดำเนิน